Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle oo deg deg ugu laabtay Jowhar xili mooshin laga waday – Banaadir weyne
Guddoomiyaha Baarlamaanka maamulka Hirshabelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed ayaa maanta dib ugu laabtay magaalada Jowhar, waxaana soo dhaweeyay Xildhibaano iyo maamulka Sh.Dhexe.
Cismaan Barre ayaa mudooyinkan ku sugnaa magaalada Muqdihso maadaama uu fasax ku maqanyahay Baarlamaanka Hirshabelle, waxaana jira warar sheegaya in dib u laabashadiisa ay ka danbeysay markii ay soo shaac baxday wararka la xiriira in mooshin isaga ka dhan ah la wado.
Gudoomiyaha oo Saxaafada la hadlay ayaa sheegay in deg deg loo furi doono kulamadii Baarlamaanka, Isagoo baaq Nabadeed u diray beelaha ku dagaalamaya qeybo kamid ah Hiiraan.
Guddoomiye ku xigeenka 2aad ee Baarlamaanka Hirshabelle Canab Axmed Ciise oo eheyd Kusimaha Gudoomiyaha iyo Madaxweynaha Hirshabelle ayaa xilalkaas ku wareejisay Cismaan Barre Maxamed, iyadoo sheegtay in shaqo wanaagsan ay qabteen.
Guddoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar iyo kusimaha guddoomiyaha maamulka gobolka Sh/dhexe Maxamed Cabdi Sheekh oo Warbaahinta la hadlay waxey sheegeen iney ku faraxsanyihiin dib u soo noqoshada Gudoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle. – Universal Somali TV